Nagu saabsan - Maokun Import & Export Co., Ltd.
Soo dejinta iyo dhoofinta Maokun Co., Ltd.
U adeeg adduunka
u dooda dabeecadda nolosha dabiiciga ah
fayadhowrka sare, warshad sifeysan oo shaah laga sifeeyay oo ku taal wuyi, oo ay ku jiraan aqoon isweydaarsiga xirxirida, bacda shaaha Ahraamta OEM, Matcha To Go OEM aqoon isweydaarsi, iwm.
Dukaan hal-joog ah
Waxaa ka horeeyey Maokun Import and Export Co., Ltd. waa warshad isku dhafan iibinta, wax soo saarka, cilmi baarista iyo horumarinta, shaaha iyo shaaha. Waxay bixin kartaa adeegyo taageeraya shaaha iyo shaaha; tusaale ahaan, iibsashada shaaha oo ah shaaha hadiyad ahaan
Bilowgii ilbaxnimada aadanaha, maacuunku waxay ahaayeen qayb lama -huraan u ah nolosha aadanaha. Kumanaan sano ka dib, iyada oo ay socoto horumarka ilbaxnimada aadanaha, waxaan sii wadnay inaan ka dhigno weelashaas kuwo aad u qurux badan, wax ku ool ah oo jilicsan.
Ka sokow, waxaan sidoo kale leenahay nadaafad sare oo u gaar ah, warshadda shaaha la safeeyey ee wuyi, oo ay ku jiraan aqoon -isweydaarsiga xirxirida, bacda shaaha Ahraamta OEM, Matcha To Go OEM aqoon -isweydaarsi, iwm. u hibee si uu u noqdo u doodaha iyo hogaamiyaha shaaha dabiiciga ah.
Soo dejinta Maokun & Dhoofinta Co., Ltd waxaa lagu aasaasay Jinhua, Zhejiang.
Shirkadda bulut alaunch oo ah "bay'ad u fiican, wax -soo -saar leh iyo hal -abuurnimo"
Shirkadu waxay ku guuleysatay "abaalmarinta hal -abuurka teknolojiyadda ugu wanaagsan" xafladda sideedaad ee Shiinaha
Shirkaddayada Shaaha Madow waxaa lagu soo saaray 247 tan oo iib ah USD 5,000,000
Wuxuu ku guuleystay abaalmarinta gobolka “Shirkadaha Sayniska Beeraha iyo Teknolojiyadda ee Zhejiang”, “Shirkadaha Hoggaamiya Kaymaha”, “Shirkadaha Beeraha ee Muhiimka ah”
Shirkadda ayaa lagu qiimeeyay inay tahay shirkadda ugu horreysa ee caawisa dadka saboolka ah
2018-Heerka maamulka beerta shaaha oo la hagaajiyay oo la soo bandhigay nidaamka maareynta casriyeynta sayniska
AAN BILOWNO KA HADALKA MASHRUUCAADA